Xanshashaqa Bulshadda iyo Cali Khaliif!! | Welcome to Lafweyne.com|
Xanshashaqa Bulshadda iyo Cali Khaliif!!
Jan 21, 2016 - 1 Aragtiyood
Degaamada SSC, xanshashaqa bulshadu wuxuu beryahan u badanyahay geesi nimada Prof. Cali Galaydh iyo kelyo adayga uu muujiyey, iyo sida uu ugu dhiiradey in uu cabsi la’aan ku dhex joogo degmada Buuhoodle, isaga oo arkaya ciidamadii Somaliland oo ku soo aadan halka uu deggan yahay. Waxaa yaabka sii kordhinaya Cali ma haysto Hal Askari.
Dadku Waxay xusuusan yihiin in degmada Taleex, profisarku isaga oo haysta 25 baabuurta gaashaaman ah, ka baxsaday halkii uu deganaa markuu maqlay Somaliland ayaa soo socota. Sidoo kale wuxuu baneeyey xaruntii lagu caleemo saari lahaa ee Saaxdheer, waana kii ka gudbey xadka Soomaliya, ee buulal ka samaystay EERIGO, halkii ambadka ku caan baxday.
Doraadna, waxay ahayd dhacdo kale markii uu baneeyey Ballicad, markii ninka xoraynta loo egmaday, isaga oo aan xabbad ridin, haddana mar labaad, xadka ka gudbey, ciidamadii uu watayna aan war gelin.
Yaabka yaabkiisu waa Cali, isaga oo arkaya ciidamadii Somaliland, ee maqal kooda uu ka qixi jirey, ayuu maanta tamashle iyo kormeer, 20km in ka yar cagihiisa saldhig yadooda ku tegeyaa.
Dadku waxay is weydiinayaan, Prof. Cali ma isaga oo waranle ah ayuu weerar qaadayaa mise wuxuu usoo ban baxayaa in isaga iyo degaanka uu joogo lasoo weeraro. Ujeeda diisu mid kasta oo ay tahay, waxaa la dareemayaa hab cusub oo uu la yimid iyo kelyo adayg ku dhiiriyey in uu soo af jaro wixii waayo badan gubtaanyo ku haysey oo aanu cidna la wadaagin, in yar mooyee. Waana ujeedada Ilaa hadda muranku ka taagan yahay, qof kastaana siduu rabo ha u fasiro.
Thursday,January 21, 2016 10:06 am at 10:06
Gotta hadad reer xudun tihiin mawaxaad kadagtihiin caydatolka maha in
sad hadshaan idinkoo shansano ayidin dulfadhiyaan labaqo oo wiil oo
lsaaqahi Xarka dooxada gotta isxoreeya oo qoriga qaata dacalkii